Nisy niditra an-tsokosoko ny Twitter sy vohikala ofisialin’i Korea Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Nisy niditra an-tsokosoko ny Twitter sy vohikala ofisialin'i Korea Avaratra
Voadika ny 12 Janoary 2011 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 日本語, English
Raha ny hita, dia toa efa nihanalefaka ny fihenjanana nisy teo amin'ny ireo Korea roa tonta, satria dia nanolo-kevitra ny hifampiresahana i Korea Avaratra tato ho ato. Ao ambadik'izay anefa, mbola mitohy hatrany ireo fanafihana amin'ny alalan'ny aterineto eo amin'izy roa. Tohin'ny fametrahan'ny mpampiasa aterineto iray avy any Korea Atsimo tononkalo manevateva mikasika ny fianakavian'i Kim any Avaratra tao amin'ny vohikala ofisialin'ny Korea Atsimo Uriminzokkiri, dia nanohitra izany fanafihana izany tamina famelezana DDOS (Avy amin'ny mpandika: fanankofonana lohamilina) ny Korea Avaratra.
Androany, dia namely ny kaonty twitter ofisialin'i Korea Avaratra @uriminzok ireo piraty avy any Korea Atsimo, nameno ny timeline tamina teny mahery nandoto ny fianakavian'i Kim, araka ny voalazan'ny mediam-bahoaka any Korea Atsimo Wiki Tree[ko] sy ny media hafa. Mety ho ireo mpampiasa ny aterineto ao amin'ny DC Inside Gallery, iray amin'ireo vohikalam-pianakaviambe malaza any Korea Atsimo, no nahatonga ity fanafihana ity mba ho valifaty amin'ny fanafihan'i Korea Avaratra tamin'ny DDOS tamin'ny vohikala. Omaly, nanakana ity vohikala ity nandritra ny 30 minitra teo ho eo i Korea Avaratra taorian'ny namoahan'ny mpampiasa io vohikala io tononkalo manevateva ny fitondrana tao amin'ny vohikala ofisialin'i Korea Avaratra.
Nanampy ny Wiki Tree fa ny takarivan'ny omaly dia nitoraka tweet i @uriminzok milaza fa ‘tokony hanaiky ny soso-kevitray i Korea Atsimo’, manako amin'ny fampielezan-kevitry ny fitondrana. Kanefa teo amin'ny manodidina ny tamin'ny 8 maraina teo, nisy tweet efatra mikapoka ny fianakavian'i Kim nipoitra tao amin'ny timeline .
Sarin'ny Wiki Tree, navoakan'i mpitoraka Twitter @tkaruq007, Creative Commons 2.0
Ity eo ambany ity dia dikantenin'ireo tweet sasany:
300만 인민들이 굶어죽고 얼어죽었는데 초호화별장에서 처녀들과 난잡한 술파티를 벌이고 있는 김정일을 처단하자.[…]
“조선인민군대여! 인민군들을 먹일 돈으로 핵과 미싸일 개발에 14억 딸라를 랑비한 김정일 력도에게 총부리를 겨누자”
Raha matin'ny mosary sy ny hatsiaka ny vahoaka 3 tapitrisa, i Kim Jong-il kosa dia mikarakara fety fisotrosotroana miaraka amin'ireo vehivavy ao amin'ny trano kantony. Sazio i Kim.[…]
“Ry miaramilan'ny DPRK! Atodiho any amin'ilay Kim Jong-il mpamadika, izay nandany vola mitentina 1.4 arivo tapitrisa eo ho eo mba hanamboarana fiadiana nokleary sy missiles, raha tokony hanohana ny miaramilan'i Korea Atsimo, ny basintsika.
Toa efa nisy niditra an-tsokosoko ihany koa ny vohikala ofisialy Urimnzokkiri ary sarin'ny fianakavian'i Kim miankohoka amin'ny fomba fandevenana eo amin'ny Amperora Sinoa no navoaka tao amin'ny pejy fandraisany. Kanefa mila fotoana ny manamarina ireo vaovao ireo, nanomboka tamin'ny fanakanana ireo vohikala rehetra avy any Korea Avaratra ny any Korea Atsimo.
Ny nampirefotra ity fitohitohizana fanafihana ity dia tononkalo manesoeso navoakan'ny mpampiasa ny DC Inside Gallery. Free North Korea Radio, foibenà fampielezampeo ao Seoul, tantanin'ireo mpitsoa-ponenana avy any Korea Avaratra, dia nanambara tamin'ny 4 Janoary fa nisy tononkalo miisa andalana 12, raha topaza-maso dia toa fiderana be ny fianakavian'i Kim kanefa fanevatevana mivantana ny fitondrana Koreana Avaratra tokoa, navoaka tao amin'ny vohikala ofisialin'ny Governemantan'i Korea Avaratra Uriminzokkri teo anelanelan'ny 20-21 Desambra tamin'ny taona lasa teo. Voavakin'olona an-jatony maro izany.
Sary azo tamin'ny dikan'ity tononkalo , izay miparitaka any amin'ny aterineto.
Ny lohatenin'ity tononkalo ity dia toa ‘ireo litera voalohany no tena izy.’ Rehefa mamaky avy any ankavia mankany ankavanana izay famakian'ny Koreana, ity dia tononkalo avy any Korea Avaratra midera ny fitondran'i Kim sy maneho tsy fitiavana ny US. Kanefa raha ny litera voalohany isaky ny fehezanteny ihany no vakianao, dia misy hafatra miafina mivoaka: ‘Adala i Kim Il-sung. Zanaka mpivaro-tena i Kim Jong-un.’
Ny famakiana mitsangana dia fomba malaza eo amin'ireo tanora Koreana rehefa hamaky hafatra miafina.
Ny hacker/mpanoratra ity tononkalo ity dia namela ny diany ao amin'ny DC Inside Gallery. Ity pejy antsoina hoe ‘tany masina’ ity dia [ko] nampiseho ireo fifandraisana misy eo amin'ny mpampiasa ny aterineto, izay manontany ny iray amin'izy ireo hoe ‘afaka miditra an-tsokosoko ao amin'ny vohikala Uriminzokkiri ve aho,’ ary ny iray dia namaly, ‘rehefa miezaka miditra amin'io vohikala io amin'ilay ‘fomba mitsangana’ aho, dia mety.’
Ny sainin'ireo Shinoa any ivelany momba ny honohono ho fialàn'i Xi Linping
Shina 11 ora izay
Japana 1 herinandro izay
Afganistana 1 herinandro izay
Fomba ataon'ireo Rosiana hanoherana ny ady ao Okraina avy amina fanjakana tsy refesi-mandidy iray
Rosia 2 andro izay
Mitondra Amboaram-Peon-Jorery ny Vanim-potoanan'ny Andro Mafana
Azia Atsinanana 18 Septambra 2016